I-UtterTechnology yenye yezona bhlog zibalaseleyo zeeNgcebiso zasimahla kunye neeTrakhi zokufundisa malunga neTekhnoloji efana neLifu, iMidlalo, iiMobiles, i-IoT, iNtengiso yeDijithali kunye nezinye iindidi ezininzi. Ndiza kuhlala ndisongeza ezinye iindidi njengoko kufuneka. Izihloko zinokuba luncedo kakhulu kubomi bakho bemihla ngemihla namhlanje obujikeleze iTekhnoloji. Hlala ubukele le bhlog ukuze ufumane uhlaziyo olungakumbi.
Ilizwi lanamhlanje #337 Ingcebiso kunye nempendulo
Ngamana 21, 2022 Ngamana 21, 2022
I-Wordle ithathe ihlabathi ngesaqhwithi, kwaye nokuba awuzange udlale umdlalo wemihla ngemihla, ngokungathandabuzekiyo uye wazibona izikwere ezingabonakaliyo kumajelo asekuhlaleni. Ngaphambi kokutyhila isisombululo,…
Ilizwi lanamhlanje #336 Ingcebiso kunye nempendulo
Ngamana 20, 2022 Ngamana 21, 2022
Ilizwi lanamhlanje #335 Ingcebiso kunye nempendulo
Ngamana 19, 2022 Ngamana 19, 2022
Ilizwi lanamhlanje #334 Ingcebiso kunye nempendulo
Ilizwi lanamhlanje #333 Ingcebiso kunye nempendulo
Ngamana 17, 2022 Ngamana 17, 2022
Ilizwi lanamhlanje #332 Ingcebiso kunye nempendulo
Ngamana 16, 2022 Ngamana 16, 2022
Ilizwi lanamhlanje #331 Ingcebiso kunye nempendulo
Ngamana 15, 2022 Ngamana 15, 2022
Uyisebenzisa njani iAmazon Echo ukumamela iiPodcast zeApple
IAmazon Echo inokuba sisazulu salo lonke ulonwabo ekhayeni lakho. Oku kubandakanya ukumamela iipodcasts, umculo, okanye nayiphi na enye into edlala isandi kwiTV yakho yoMlilo.
Amandla kunye nelore: Apex Legends Mobile Fade
U-Ignacio Huaman, owokuqala kwabaninzi be-Apex Legends Mobile-First Legends, Fade. Ukuza kuthi ga ukuba wongezwe kuluhlu oluphambili lweApex Legends, iFade iya kufumaneka kuphela kwiApex Legends…
Iikhredithi zasimahla ezinekhowudi zoMkhosi zaseTycoon ngoMeyi ka-2022
Ngaba ufuna iikhredithi zasimahla kwi-Military Tycoon Roblox? Kweli nqaku sibonelela ngeekhowudi zoMkhosi zaseTycoon ngoMeyi ka-2022 ukufumana iikhredithi zasimahla. Ngoku ungasebenzisa uninzi…
Iikhowudi ze-Pet Simulator X (ngoMeyi 2022): Iidayimani zasimahla, iNkozo yeNgqekembe kunye nesonka seGinger
Fumana zonke iikhowudi zomdlalo weRoblox onemibala kunye nomnandi wePet Simulator X ukuze ufumane iiDayimane zasimahla, iiNgqekembe zeNgqekembe, kunye nokunye. Ufike kwindawo elungileyo ukuba...
Iikhowudi zeProjekthi yeRoblox yeGhoul (ngoMeyi 2022) -Izijikelezo zasimahla kunye nokunyusa
Iikhowudi zeRoblox zeProjekthi yeGhoul zinokukunceda ukuba ufumane i-XP ngokukhawuleza ngokukunika ii-spins zasimahla, ukonyusa, kunye nokunye kumdlalo. KwiProjekthi yeGhoul, unokukhetha ukuba…
Ilizwi lanamhlanje #327 Ingcebiso kunye nempendulo
Ngamana 11, 2022 Ngamana 15, 2022
I-Wordle ithathe ihlabathi ngesaqhwithi, kwaye nokuba awuzange udlale umdlalo wemihla ngemihla, ngokungathandabuzekiyo uye wazibona izikwere ezingabonakaliyo kuwo wonke amajelo asekuhlaleni. U-Wordle uthathe…
Ilizwi lanamhlanje #324 Ingcebiso kunye nempendulo
Ngamana 9, 2022 Ngamana 15, 2022
Iindlela ezi-7 zokulungisa Umculo we-Instagram ungasebenzi
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, abantu abaninzi baye bafumanisa ukuba ngamanye amaxesha abanako ukongeza umculo kwi-Instagram. Ngokukodwa, isitikha somculo kwi-Instagram Stories asisebenzanga…
Ulithatha njani iphepha lewebhu lilonke kwi-iPhone okanye kwi-iPad
I-iOS ye-Apple inento eyakhelwe-ngaphakathi ekuvumela ukuba uthathe umfanekiso weskrini. Eli nqaku likuvumela ukuba ubambe iphepha lewebhu lonke kwi-iPhone okanye kwi-iPad yakho, onokuthi uyigcine…
Idlalwa njani iRoblox kwiNintendo Tshintshela
IRoblox liqonga lokudlala elidumileyo elivumela abantu ukuba benze eyabo imidlalo enokudlalwa nguye nabani na. Izigidi zabantu zidlala inani elikhulu lemidlalo eqongeni,…
Uyenza njani imowudi emnyama kwi-Wikipedia app okanye iwebhusayithi
Nasiphi na isixhobo sinokufikelela kwiWikipedia kwimodi emnyama. Ukuba usebenzisa iWikipedia kakhulu, imvelaphi emhlophe yesiza mhlawumbi itshiswe engqondweni yakho. Isiza senziwe ukuba sibonakale silula ngenjongo.
U-Zelle ukhuselekile ukuthumela nokufumana imali kubantu abathembekileyo
Ungathumela imali kumntu omaziyo nomthembileyo usebenzisa uZelle. UZelle wajoyina iinkonzo ezifana nePayPal kunye neVenmo kwi-2017 njengendlela elula yokuthumela nokufumana imali kwifowuni yakho.
Indlela yokuThumela ngaphandle amaNqaku kunye neePosti eziSekwe kwiSibhalo kuFacebook
UFacebook wenze isixhobo esenze kwalula kunangaphambili ukuba abantu bashiye inethiwekhi yoluntu ngaphandle kokucima umxholo wabo ngokusisigxina.
Unengxaki ngeapp yeAmazon? Iindlela ezi-7 zokusombulula ingxaki
Ngamana 13, 2022 Ngamana 13, 2022
Nge-app ye-Amazon, ungathenga kwaye ukhangele, ubeke ii-odolo ze-intanethi, ujonge imeko ye-odolo, kwaye ufumane nesaphulelo kwiivenkile eziphantsi kwe-Amazon ezifana ne-Whole Foods. Nini…
Uzigcina njani izikhombisi zeMephu zikaGoogle kwifowuni yakho ukuze uzisebenzise ngaphandle kweintanethi ngelixa uqhuba
Ngamana 12, 2022 Ngamana 12, 2022
Sebenzisa iiMaphu zikaGoogle ngaphandle koqhagamshelo lwe-Intanethi ngokukhuphela umkhomba-ndlela.Xa uphakathi kwelizwe kwaye ungenakho ukufikelela kwi-intanethi, iiMaphu zikaGoogle zingumsindisi wobomi. Oku...